Ogaden News Agency (ONA) – Riwayadii lamagac baxday “Inuu qayshado Maanta Qasabaan Kaga keenay “ oo ka Yaabisay magalada Toranto ee dalka Canada.
Riwayadii lamagac baxday “Inuu qayshado Maanta Qasabaan Kaga keenay “ oo ka Yaabisay magalada Toranto ee dalka Canada.
Posted by maamule1	/ July 8, 2012
Hebenimadii sabtida ahayd July 7, 2012 ayaa waxa si heersara ah loogu daawaday riwayadii mudada dheer la sugayay ee ay daadihinayeen xidigaha OYSU iyo fanaaniinta iyo abwaanada ogadennya kuwooda ugu caansan.
Shacabwaynaha ku nool Toranto oo aan ayagu intabadan nasiib u hellin inay si fool ka fool ah u daawadaan riwayadaha tayada leh ee ay dhigaan dhalinta iyo ardayda Ogadenya (OYSU) ayaan abaarihii 10:00 fiidnimo waxay soo buuxdhaafiyeen madashii ay riwaayadu ka dhacaysay oo ahayd Sheraton Hotel.
Riwayadan oo ahay runtii riwaayad macna wayn iyo midhawayn ku fadhiday ayay dadkii ku noolaa Magalada Toranto aad ugu maqsuudeen sida ay u dhacday.
Waxaa xusid mudan oo filan waa ku noqotay shacabka ree Toranto, habkii iyo midhaha suugaanta macaan ee ka soo maaxaysay maskaxdii dhalinta dada yar ee OYSU iyo fanaaniintii caanka ahaa Sida Jaangoo Abdi khaaliq.
Isku soo wada duuboo magaalada Toranto aya manta waxaa qabsayday oo jidadka aad loogu arkayaa baabuur qurquruxbadan oo uu ka lusho calamnka Ogadenya, waxaa kale oo ay bulshadu hadal haysaa riwaayadii xalay dhacday iyo faalooyin la xidhiidha.
Riwaayadan iyo shirar sadex cisho ka socday magaalada Toranto ayaa la filayaa inay wax wayn ka badali doonto abaabulka iyo dadar galinta howlaha Halganka loogu jiro sidii heeryada gumaysiga lagu tuuri lahaa.